ဟူးမားရွန်း၏ သင်္ချိုင်းဂူ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဟူးမားရွန်း၏ သင်္ချိုင်းဂူ သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဒေလီမြို့ရှိ မဂိုဘုရင် ဟူးမားရွန်း၏ သင်္ချိုင်းဂူဖြစ်သည်။ ထိုသင်္ချိုင်းဂူအား ဟူးမားရွန်း၏ ပထမဇနီးနှင့် ကိုယ်လုပ်တော်ချုပ်ဖြစ်သော မိဖုရား ဘီဂါ ဘီဂမ် (ဟာဂျီဘီဂမ် ဟုလည်း ခေါ်သည်။)  မှ ၁၅၆၉-၇၀ ခုနှစ်အတွင်း တည်ဆောက်စေခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်းထုတ်တည်ဆောက်သူမှာ သူမရွေးချယ်ခဲ့သော ပါးရှားဗိသုကာပညာရှင်များ ဖြစ်သည့်  မာယက် မာဇာ ဂီယာ နှင့် သူ၏ သားဖြစ်သူ ဆေယစ် မိုဟာမက် တို ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းသည် အိန္ဒိယတိုက်ငယ်ပေါ်ရှိ ပထမဆုံး ဥယျာဉ်သင်္ချိုင်းဂူဖြစ်ပြီး  အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဒေလီမြို့ နီဇားမားဒင် အရှေ့ပိုင်းတွင် တည်ရှိကာ ဟူးမားရွန်းမှ ၁၅၃၃ တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော ဒီနာပါနာရဲတိုက် သို့မဟုတ် ပူရာနာကီလာ (ခံတပ်ဟောင်း)အနီးတွင် တည်ရှိသည်။ ထို့အပြင် သဲကျောက်နီများကို ဤမျှအများအပြား အသုံးပြုထားသော ပထမဆုံး အဆောက်အဦးလည်း ဖြစ်သည်။  သင်္ချိုင်းဂူအား ယူနက်စကိုမှ ၁၉၈၃တွင် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ စာရင်း၌ ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ မူလအတိုင်း ပြန်လည်ထားသို မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်းကို အကြီးအကျယ်ဆောင်ရွက် ပြီးစီးခဲ့သည်။  ဟူးမားရွန်း၏ ပင်မသင်္ချိုင်းဂူ အနီးတွင် ဂူသို့လာရာ အနောက်ဘက် ပင်မဝင်ပေါက် လမ်းတစ်လျှောက်တွင် အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦး အငယ်စားများရှိပြီး ပင်မဂူသင်္ချိုင်းထက် နှစ် ၂၀ မျှပင်စောသော အဆောက်အဦး တစ်ခုလည်း ပါဝင်သည်။ ၎င်းမှာ အီဆာ ခန် နီယာဇီ ၏ သင်္ချိုင်းဂူ အဆောက်အဦးဖြစ်ပြီး ၁၅၄၇ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ကာ ထိုသူမှာ မဂို တို့ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သော ဆူရီမင်းဆက်မှ ရှာရှားဆူရီမင်း၏ လက်အောက်မှ အာဖဂန် သူကောင်းမျိုးတစ်ဦးဖြစ်သည်။
တည်ရှိသည့် နိုင်ငံ အိန္ဒိယ
စတင်သတ်မှတ်ခြင်း ၁၉၉၃ (၁၇ ကြိမ်)
ဟူးမားရွန်း၏ ပင်မသင်္ချိုင်းဂူအား အဆောက်အဦး အစုအဝေးများက ဝန်းရံထားပြီး ၎င်းတို့တွင် မိဖုရား ဘီဂါ ဘီဂမ်၊ ဟာမီဒါ ဘီဂမ် တို့၏ သင်္ချိုင်းများ အပြင် ဟူးမားရွန်း၏ တီတော်ပြီး ရှားဂျာဟန် ဘုရင်၏ သားတော် ဒါရာရှီကို၏ သင်္ချိုင်း နှင့် အခြား မဂိုများဖြစ်ကြသော ဂျဟန်ဒါ ရှား ဘုရင်၊ ဖာရွတ်ဆီယာ ဘုရင်၊ ရာဖီ အယ်လ်-ဒါဂျတ် ဘုရင်၊ ရာဖီ အွတ်-ဒေါ်လတ် ဘုရင်၊ မိုဟာမက် ကမ် ဘက်ခ်ရှ်နှင့် ဒုတိယမြောက် အလမ်ဂျာ ဘုရင် တို့ ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် မဂိုဗိသုကာ ပညာ၏ တဟုန်ထိုး တိုးတက်မှုကို ဖော်ပြနေပြီး ပုံမှန်တွေ့နေကျ ပါရှားဥယျာဉ်ဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယတွင် ယခင်က မရှိခဲ့သော ချာဘား ဥယျာဉ် လည်း ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် နောက်ပိုင်း မဂိုဗိသုကာပညာအတွက် ဥပမာ အဖြစ် ပြဿခဲ့သည်။ ၎င်းသည် သူ၏ဖခင် ပထမ မဂိုဘုရင် ဘာဘာ၏ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ကဘူးလ်မြို့တွင် တည်ရှိသော ဘက် အီ ဘာဘာ (ဘာဘာ၏ ဥယျာဉ်) ဟု ခေါ်သော ဂူသင်္ချိုင်းမှ သိသာစွာ ကွဲထွက်သွားသည်။ သို့သော်လည်း ဘာဘာဘုရင်သည် နိဗ္ဗာန်ဘုံ ဥယျာဉ်တွင် မြှုပ်နှံသော ဓလေ့ကို စတင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူ၏ ဘိုးဘေးတစ်ဦးဖြစ်သည် အာရှကို အောင်နိုင်ခဲ့သည့် ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံ ဆာမာကန်းတွင် ရှိသော တီမားဘုရင်၏ ဂူသင်္ချိုင်း ပုံစံကို ယူထားပြီး ၎င်းသည် အနာဂတ် မဂိုတို့၏ တော်ဝင်သင်္ချိုင်းဂူများ အတွက် ဗိသုကာလက်ရာ ဥပမာ အဖြစ် ပြသခဲ့ကာ ဗိသုကာလက်ရာသည် အက်ဂရာရှိ တာ့ဂျ်မဟာရ် ကို တည်ဆောက်ရာတွင် အထွဋ်အထိပ် ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဂူသင်္ချိုင်း တည်ဆောက်ရန် နေရာကို ယမုန်နာမြစ်ကမ်းပေါ်တွင် ရွေးချယ်ထားပြီး ဒေလီမြို့မှ ဘုရင်များနှင့် တိုင်းသူပြည်သားများ လေးစားကြည်ညိုကြသည့် ဆူဖီသူတော်စင် နီဇာမူဒင်း အော်လီယာ၏ ဂူသင်္ချိုင်း နီဇာမူဒင်း ဒါဂါနှင့် နီးကပ်သောကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဟူမားရွန်း သင်္ချိုင်းဂူ၏ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။ ၁၈၅၇ ခုနှစ် အိန္ဒိယပုန်ကန်မှုတွင် မဂိုမင်းဆက် နောက်ဆုံးဘုရင်ဖြစ်သည့် ဗဟာဒူး ရှား ဇာဖာသည် အခြား မင်းသား ၃ ဦးနှင့် အတူ ထိုနေရာတွင် ခိုလှုံခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးတွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြည်နှင်ဒဏ်မပေးမီအချိန်က အင်္ဂလိပ်တပ်မှ ဗိုလ်ကြီးဟော့ဆန်မှ ဖမ်းမိခဲ့သည်။ ကျွန်မင်းဆက် စိုးစံစဉ် (၁၂၆၈-၁၂၈၇) တွင် ထိုမြေသည် ကီလိုခယ်ရီခံတပ်၏ အောက်တွင် ရှိပြီး နာဆီရပ်ဒင်၏ သားဖြစ်သူ စူလတန် ကီခူဘတ်၏ မြို့တော်နေရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဘတ်တာရှီဝါလာ သင်္ချိုင်းဂူ အဆောက်အဦး အစုအဝေးသည် ဟူးမားရွန်း သင်္ချိုင်းဂူ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ ၏ ကြားခံဇုံ နေရာတွင် တည်ရှိပြီး ထိုအဆောက်အဦး အစုအဝေး နှစ်ခုကို လမ်းငယ်ကလေး တစ်ခုဖြင့်သာ ခြားထားသော်လည်း ၎င်းအဆောက်အဦး အစုအဝေး တစ်ခုစီတွင် ကိုယ်ပိုင် တံတိုင်း သီခြားစီ ရှိကြသည်။
ဟူးမားရွန်း သင်္ချိုင်းဂူကို ဝဲဘက်ဥယျာဉ်မှ မြင်ရပုံ
ဟူးမားရွန်းသင်္ချိုင်းဂူ၏ မုခ်ဦးအဝင်ဝ အသေးစိတ်
သင်္ချိုင်းဂူအား တပြေးညီစောင်းထားသော သုံးဖက်မြင်ပုံ
ဟူးမားရွန်း သင်္ချိုင်းဂူအား ဝင်ပေါက်မှ မြင်ရပုံ
ဘေးခန်းရှိ ဟာမီဒါ ဘာနုဘီဂမ် နှင့် ဒါရာရှီကိုတို့၏ အုတ်ဂူများ
ဟူမားရွန်း သင်္ချိုင်းဂူ အနီးတွင် ရှိပြီး ၁၅၄၇ ခုနှစ်တွင်ပင် တည်ဆောက်ထားသော အီဆာခမ်း၏ ဗလီ၊ သူ၏ ဂူနှင့် တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် ရှိသည်။
အာရာဘာ ဆာရိုင်း သို့ဝင်ပေါက်၊ ဟူးမားရွန်း ဂူသင်္ချိုင်း၏ တောင်ဘက် အဝင်လမ်းတွင် ရှိသည်။
ဟူးမားရွန်း သင်္ချိုင်းဂူ အနီးရှိ အက်ဖ်ဆာဝါလာ သင်္ချိုင်းဂူ
ဟူးမားရွန်းအုတ်ဂူအား အရှေ့ဘက်မှ ဆတ္တာသည်၏ အုတ်ဂူနှင့် အတူ တွေ့ရပုံ ဒေလီ (၁၈၅၈)
၁၈၆၀တွင် ချာဘားဥယျာဉ်၏ အလယ်ဗဟိုရှိ စတုရန်းပုံ ရေကန်များအား အင်္ဂလိပ် ပန်းခြံပုံစံ အဝိုင်းများဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည်။
သင်္ချိုင်းဂူအား တပြေးညီစောင်းထားသော သုံးဖက်မြင်ပုံ ကို တောင်ဘက်နှင့် အရှေ့ဘက်မှ မြင်ရပုံ
ဟူးမားရွန်း သင်္ချိုင်းဂူ အတွင်းရှိ အလယ်ဗဟို အမိုးခုံး
↑ Annemarie Schimmel; Burzine K. Waghmar (2004)။ The Empire of the Great Mughals: History, Art and Culture။ Reaktion Books။ pp. 149။
↑ HUMAYUN'S TOMB in DELHI။ UNESCO။ 27 January 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “In 1565 the previous queen of the Mughal Dynasty, Haji Begum, ordered the construction of the largest and the most splendid mausoleum in the empire for her late ill-fated husband, Humayun, near to the Yamuna River.”
↑ Burke၊ S. M. (1989)။ Akbar, the Greatest Mogul။ Munshiram Manoharlal Publishers။ p. 191။
↑ Eraly၊ Abraham (2007)။ The Mughal world : Life in India's Last Golden Age။ Penguin Books။ p. 369။ ISBN 9780143102625။
↑ Smith၊ Vincent Arthur (1919)။ Akbar: The Great Mogul 1542-1605။ Clarendon Press။ p. 125။
↑ Henderson၊ Carol E. (2002)။ Culture and Customs of India။ Greenwood Press။ p. 90။ ISBN 9780313305139။
↑ "Mausoleum that Humayun never built"၊ April 28, 2003။ 31 January 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on6December 2007။
↑ Sinha၊ Gayatri (2005)။ "Women Artists in India: Practice and Patronage"။ in Cherry၊ Deborah; Helland၊ Janice (eds.)။ Local/global : Women Artists in the Nineteenth Century။ Ashgate။ p. 70။ ISBN 9780754631972။
↑ ၉.၀ ၉.၁ Humayun's Tomb Archived 10 April 2009 at the Wayback Machine. Archaeological Survey of India.
↑ Humayun's Tomb။
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ Humayun's Tomb, Delhi World Heritage Committee, UNESCO.
↑ "Facelift for Humayun"၊ 19 September 2013။ 23 September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Delhi - Humayun's Tomb and Adjacent Building Delhi Through Ages, by S. R. Bakshi. Published by Anmol Publications PVT. LTD., 1995. ISBN 81-7488-138-7. Page 29-35.
↑ Humayun's Tomb Archived 17 April 2010 at the Wayback Machine. archnet.org.
↑ Humayun's Tomb Frommer's India, by Pippa De Bruyn, Keith Bain, Niloufer Venkatraman, Shonar Joshi. Published by Frommer's, 2008. ISBN 0-470-16908-7. Page 316.
↑ The Monuments at Delhi World Heritage Monuments and Related Edifices in India, by Ali Javid, Tabassum Javeed. Published by Algora Publishing, 2008. ISBN 0-87586-482-1. pp 105-106.
↑ THE EX-KING OF DELHI—QUESTION. (Hansard, 11 December 1857)။
↑ Batashewala Complex Conservation။ Archnet။ 15 June 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟူးမားရွန်း၏_သင်္ချိုင်းဂူ&oldid=671058" မှ ရယူရန်
၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၇:၅၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၇:၅၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။